अबको एक महिनामा भवन बनाउन शुरु हुन्छ – शेष घले अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
-- होमप्रसाद लम्साल / प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ २७, २०७३
नवौं क्षेत्रीय सम्मेलनले अघि सारेको यो ‘भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड’ प्रस्ताव भनेको के हो र केका लागि ?
सबैभन्दा पहिले त हामी १३ वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली संघ एउटा अभियानका रुपमा सुरु भएको संस्था अहिले निकै ठूलो र प्रभावकारी देखिन थालेको छ । समय काल परिस्थितिसंगै संस्थाका दायित्व र कामहरू पनि बढ्दै जाने हुनाले संस्थालाई दिगो र समयानुसार प्रभावकारी बनाउन यो योजना प्रस्ताव गरिएको हो । हामी भूकम्पका बेलामा होस वा लगानीका हिसाबले भनौ जे जति काम गर्दै आएका छौं संस्थाप्रति नेपाल र नेपालीहरूको विश्वास र आशा दुवै बढेको मलाई महसुश भएको छ । तर, त्यसको तुलनामा संघको क्षमता वृद्धि हुन र संस्थाले क्षमता हुँदा हुँदै पनि सोही अनुसारको डेलिभरी गर्न कठिनाई हुन थालेको छ । त्यसैले संस्थालाई आगामी बीस वा तीस वर्षको चुनौती सामना गर्नेगरी संरचनागत विकास गर्ने भन्ने सोचका साथ भिजन २०२० भन्ने अवधारणा ल्याइएको हो ।
यो कहिलेदेखि लागु हुन्छ त ?
यो सम्मेलनमा मुख्य विषयको रुपमा प्रस्तावमा परेको छ । सम्मेलनले पास गरेको यो दस्तावेज आईसिसि बैठकबाट अनुमोदनगरी थप सुझावका लागि एनसिसि र आईसिसिमा पठाएर पूर्ण आकार पाएपछि आगामी महाधिवेसनले त्यसलाई अनुमोदन भएपछि लागु हुनेछ ।
यसको मतलब एनआरएन अहिलेकै संरचना र नीतिका आधारमा चल्दैन भन्ने हो ?
चल्नत चलिरहेकै छ तर पनि समय अनुसार परिवर्तन भएन भने त्यस्ता संस्थाहरू पछि पर्न सक्छ । कुनै पनि संस्था पुरानै स्वरुपमा अडिएर बस्न सक्दैनन् । समयसँगै परिवर्तन हुँदै संस्थालाई विकास गरेर लैजानु आवश्यक हुन्छ । एनआरएनको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । हिजो जसजसले यो संस्था निर्माण गर्ने सोच बनाउनुभयो, त्यतिखेर फरक आवश्यकता थियो, आज त्यहि संस्थाको आवश्यकता फरक बन्दै गएको छ । जुन उचाईमा संस्था छ अब हामीले भोलिको तयारी आजै गरेनौं र त्यही अनुसारको नीति र संरचना विकास गरेनौं भने यो उँचाइलाई कायम गर्न सक्दैनौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको भोलि एनआरएनलाई विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तै बनाउने योजना हो । एउटा तीतो यथार्थ के हो भने, नेपालभित्र र बाहिर एनआरएनप्रति अपेक्षा बढे अनुसार परिणाम दिनसक्ने हाम्रो सामथ्र्य बन्न सकेको छैन ।
यो बृहत योजनामा गैरआवासीय नेपाली संघको उद्देश्य नै परिवर्तन हुन्छ की संरचना मात्र ?
हिजो जे उद्देश्यले खोलिए पनि अबको लागि संस्थाको दायित्व र प्रभावकारिता बढाउन हामी समयानुसार उद्देश्य पनि फेरबदल गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । हिजो अघि सारेका उद्देश्यमध्ये कतिपय पूरा भइसकेको सन्र्दभमा अव नयाँ उद्देश्य दिनु आवश्यकता र समयको माग पनि हो । केहि निश्चित उद्देश्यहरूमा साखै परिवर्तन गर्न जरुरी छैन । नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मूल सार र नेपालको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको संवाहक बन्ने मूल लक्ष्यमा कुनै परिवर्तन हुँदैन ।
संरचनागत सुधारका कुराको मुख्य सार के हो ?
सन् २०३० सम्म संस्थालाई कस्तो बनाउने भनेर खाका बनाउन जरुरी छ त्यसैले हामी बनाउँदै छौं । ती लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०२० सम्ममा संस्थागत सुधार र संरचना बलियो बनाउने भन्ने त्यो नाराको मूल सार हो । त्यसका लागि हामीले तीनवटा विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ । पहिलो, अब गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र एनआरएन सचिवालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ । नीतिगत नेतृत्व कार्यसमितिले गर्ने र दैनिक कार्यसञ्चालन सचिवालयले गर्नेगरी नीति तय गर्नुपर्छ भन्ने मुल उद्देश्य हो । सस्था संधै कस्तो नेतृत्व आउँछ उसैको भरमा चल्नु हुन्न ।
अर्को कुरा परोपकारी कामका लागि संस्था अन्तर्गत बेग्लै फाउण्डेसन वा परोपकारी युनिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो, संस्थाको नीति निर्माण र पैरवीका लागि ‘पोलिसी एन्ड एडभोकेसी’ को संरचना चाहिन्छ । नेपालमा सीप र लगानीको विस्तार, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत गैरआवासीय नेपाली संघले गरिरहेका जति पनि काम छन । तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी सही लक्ष्य छिटो हासिल गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत खाका बनाइनेछ ।
एनआरएनएको पुन:निर्माणका कुरा कहाँ पुग्यो ?
हामी शुरु गरेको पून:निर्माणको विषय यतिखेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी खोज्ने क्रममा छौं । हामीले थुप्रै लगानी गर्नेहरू भेटेका छौं । जसबाट हामी उत्साहित पनि छौं । अबको केहि महिनामा पून:निर्माण प्रक्रिया शुरु हुन्छ । केहि सरकारी विषयमा पनि सहमति गर्न बाँकी रहेको छ ।
आफ्नै कार्यकालमा संस्थाको भबन बनाउने कुरा थियो कहाँ पुग्यो त्यो काम ?
हो, मैले आफ्नै कार्यकालमा सस्थाको भवन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । अव हामीले सस्थाको आफ्नै भवन बनाउने कामका लागि भवनको नक्सा पास भैसकेको छ । अबको एक महिनामा भबन बन्न शुरु हुन्छ । सबै टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । हामीले ठेक्का दिँदैमा एक बर्षमा भवन बनाउनेगरी तयारी गरेका छौं ।